हिमाल खबरपत्रिका | ‘मनसुन सकिएपछि मुग्लिङ–नारायणगढ ३५ मिनेट’
‘मनसुन सकिएपछि मुग्लिङ–नारायणगढ ३५ मिनेट’
वैशाख २०७२ देखि थालिएको मुग्लिङ–नारायणगढ (३६ किमि) सडक विस्तार तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा यात्रा सकसपूर्ण बनिरहेको छ। सडक आयोजना प्रमुख रोहितकुमार विसुराल काम सम्पन्न गर्न र पहिरो आउन नदिन उपचारात्मक उपाय अपनाइरहँदा जोखिम कम भइसकेको बताउँछन्।
यो सडकको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
अहिले (२८ असारमा) नारायणगढबाट १७ किलोमिटर पूर्व गाईघाटबाहेक अरु ठाउँमा सवारी आवागमन सहज रुपमा भइरहेको छ । कालोपत्रे करीब–करीब सम्पन्न भइसकेको छ । तर, कमजोर भूबनोट भएको र पहिरो गइरहने यो ठाउँमा बर्खाका बेला सवारी चलाउँदा सावधान भने हुनैपर्छ ।
गाईघाटमा के भएको हो ?
त्यहाँ करीब ३० मिटर लम्बाइमा सडक चिरा परेको छ, त्यसैले सवारी आवागमन एकतर्फी बनाएका छौं । १४ वर्षअघि उक्त ठाउँमा ‘रक एंकर’ (पहिरो रोक्ने एउटा उपाय) गरिएको थियो, त्यसले काम गर्न छाडेको हो कि ? यसबारे विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, पत्ता लागेपछि त्यसै अनुसार मर्मत हुन्छ ।
तीनवटा बर्खा बितिसक्दा पनि पहिरो रोक्ने उपाय किन गरिएन ?
जोखिमपूर्ण भनिएका स्थानमा पहिरो रोक्ने काम भएको छ । तर, यहाँको कमजोर भूबनोट, हामीसँग उपलब्ध बजेट र स्रोतसाधनका कारण सबै पहिरो रोकिएको छैन । केही पहरोमा खुकुलो गरी अडिएका चट्टान कुनै पनि बेला झर्न सक्छन्, त्यसलाई बलियोसँग अड्याउने उपाय तत्काल हामीसँग छैन, त्यसमा लागत निकै बढी हुन्छ ।
विस्तार कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
धेरै हदसम्म काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडकलाई तीन भागमा बाँडेर भइरहेको काममध्ये पश्चिमतर्फ एक र दुई नम्बरमा करीब–करीब सम्पन्न भइसकेको छ । तीन नम्बरमा दुई तहको कालोपत्रे सकेर ‘वेदर कोट’ मात्रै बाँकी छ । दशैंसम्म सबै सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि नारायणगढ–मुग्लिङ यात्रा ३५ मिनेटमै पूरा हुनेछ ।
वैकल्पिक सडक आवश्यक छ ?
अहिले दैनिक १० हजार सवारी साधन गुडिरहेको यो सडकको विकल्प जरुरी देखिन्छ । नदी पारिबाट बनाउने भनिएको समानान्तर सडक नै उत्तम विकल्प हो । रणनीतिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण यो सडक जाम हुँदा, मर्मत गर्नुपर्दा र पछि सवारी चाप बढेको अवस्थामा आवागमन सहज गराउन विकल्प जरुरी हुनेछ ।